ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Kuala Lumpur ခေတ္တခရီး
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:17 PM
အင်း...ကျွန်းနိုင်ငံမှာ နေပေမယ့် ရေမကူးတတ်ဘူး ဟုတ်လား? :D
ဘယ်မှ ဝေးဝေးလံလံ မသွားဘူးပဲထား... ... အခုလိုခရီးထွက်ရတာကိုက စိတ်လက်ပြေပျောက် အပန်းပြေစေတာပါပဲ၊ အေးအေးချမ်းချမ်း စာဖတ်ခွင့်ပါ ရရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့...၊
when u guys say 'readabook', i always wonder what kind of books u guys read..
btw.. ever read "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable"?
မလင်းလက်ကြယ်စင်ရေ....ဘယ်လို အကြောင်းအရာများကြောင့် မလင်းလက်ကြယ်စင်ရဲ့...ခံစားချက်တွေက နှလုံးသွေးထဲကတောင်...ဆင်းသက်သွားရတယ်ဆိုတာကို...မှန်ကန် တိကျ မုသားကင်းတဲ့...ဖြေရှင်းချက်လေး တစ်စုံတစ်ရာကို.... ကျွန်တော်လို အမေးအမြန်း သိပ်ထူတဲ့ လူတစ်ယောက်က သိချင်ပါတယ်။ (ပို့စ်မှာ တင်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းလင်းလို့ ထပ်မေးတယ်ဆိုတာထက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွန်ကဲတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ထပ်ဆင့် မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)